सुनको मूल्यमा आज फेरी नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो ? - Jhilko
सुनको मूल्यमा आज फेरी नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो ?
६ असार,२०७६ 373 0
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उच्च भएको छ । हिजो मात्र प्रति तोला चौसठ्ठी हजार रहेको सुनको मूल्य आज एक हजारले बढेर प्रति तोलाको रु पैंसठ्ठी हजार पुगेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य अझै केहिदिन बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ । सुनको मूल्य बढ्न थालेपछि ग्राहकहरु सुन पसलमा आउन छाडेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् । सुन महंगो भएपछि नयाँ गहना किन्न भन्दा पनि पुरानो गहना गालेर नयाँ बनाउने ग्राहक बढ्ने र कतिपय ग्राहकहरुले घरायसी गर्जो टार्न समेत पुरानो गहना विक्री गर्न ल्याउने ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सुनको मूल्य हप्ताभरी नै उतार चढाब भई साताको अन्यमा भने ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । नेपाली बजारमा आईतबार बजार खुल्दा सनुकोभाउ प्रति १० ग्रामको रु ५४,०१५ रहेकोमा आज शुक्रबार प्रति १० ग्रामको रु ५५,७३० कायम रही हप्ताभरीमा १७१५ प्रति १० ग्राममा बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी चाँदीको मूल्य आइतबार प्रति १० ग्राम रु ६१७.५० कायम रहेकोमा शुक्रबार प्रति १० ग्राम ६३४.५० कायम रहि हप्ताभरीमा रु १७ प्रति १० ग्रामको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
'गलबन्दी चोरी'को अरोपपछि प्रकाश सपुतले लेखे शम्भु राइलाई यस्तो पत्र...
विप्लव समूहका विद्यार्थी केन्द्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार
६ बैशाख,२०७६0343
काठमाडौंको अनामनगरमा ११ विद्यार्थी संगठनहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी...
५ भदौ,२०७६0197
नेप्सले कम्पनीका सदस्य बैंकहरु, सूचना प्रविधि सुरक्षा विशेषज्ञ, नियमकारी निकाय अनुसन्धानमा...
३ पुष,२०७६028466